धर्मराज जोशी, कैलाली
सरकारले विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न कसिलो कानुन नबनाएका कारण मुलुकको विद्यालय तहको शिक्षाले गुणस्तरीय फड्को मार्न सकेको छैन् । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने जग नै बलियो नभएपछि उपल्लो तह राम्रो हुने कुरा भएन । कलिला बालबालिकाको भविष्य निर्माता शिक्षक वर्ग जबसम्म राज्यबाट पेलानमा हुन्छन तब सम्म यो अवस्थामा सुधार आउने देखिदैन । यहाँ सन्दर्भ राहत अनुदान कोटामा देशभर अध्यापन गराइरहेको शिक्षकहरूको हो । उनीहरू असोज २१ आन्दोलका लागि देशभरबाट काठमाडौंमा भेला हुँदैछन् । किन त आन्दोलन ?
सरकारले स्थायी शिक्षकको तलव बढायो राहतको बढाएन ? आन्दोलन भयो अनि बढायो ।
महँङ्गी भत्ताको रू १००० आन्दोलन गरेपछि दिइयो।
दुर्गम भत्ता अरुको दियो राहतको दिएन आन्दोलन भयो,दिएको छैन अझै ।
पोशाक भत्ता अरु सबैको दिँदा राहतलाइ दिएन,चारपाँच बर्ष पटकपटक आन्दोलन भए र यस बर्षबाट दिन थालियो ।
सेवा वाफतको अङ्क जोड्न आन्दोलन गर्नुपर्यो।
एकपटक यस्तो पनि भयो राहतको तलब निकासा पाउँ भनेर समेत हाम्रा पदाधिकारीहरुले आन्दोलन गर्नुपर्यो।
आम जनसमुदाय मुल्यांकन गर्नुस आन्दोलनपछि मात्रै स्वतःप्राप्त हुनुपर्ने सेव सुविधा प्राप्त हुने बानी कसले बसाल्यो ? शिक्षकले कि राज्यले ? अहिले आएर नयाँ बन्दै गरेको बिधेयकमा हामी राहत शिक्षकलाइ देख्दै देखेन जुन राज्यको सामुदायिक विद्यालयमा हामी राहत शिक्षकको अभावमा विद्यालय नै ठप्प हुन्छ,त्यस्तो चालिस हजार शिक्षकले बिगत १५/२० बर्ष देखी काम गर्दै आएका एकवर्गलाइ देख्नै नसकेर ऐन पारित गर्न लाग्दा हामी पनि छौँ है भनेर ज्ञापनपत्रका खात लगाएर पनि नसुनेपछी आफ्नो पेसागत रक्षा र रास्ट्र सेवकहरुको बीचमा गरिएको अपराधिक नीति र विभेदका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनु पर्यो । यो हाम्रो वाध्यता हो रहर होइन ।
अर्को कुरा राहत शिक्षक मात्रै होइन सम्पुर्ण १७ किसिमका शिक्षकले नै सोच्नु पर्ने ,बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने शिक्षक र सरकारका निजामती सेवामा संलग्न कर्मचारी बीच यति विधि विभेद किन ? एउटै स्तर उही तह भएपनि शिक्षकलाई फरक ढंगले हेर्ने परिपाटी कदापी राम्रो होइन ।
प्रकाशित १९ आश्विन २0७५ , शुक्रबार | 2018-10-05 11:44:17